Bulletproof Monk အက်ရှင်ကားလေးတွေကြိုက်နှစ်သက်တွေအတွက်သဘောကျမယ့်ဇာတ်ကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တွင်းမှာ တိဘတ်တောင်တန်းပေါ်မှာ အနန္တစွမ်းအင်တွေရနိုင်မယ့်ပေလိတ်ကိုစောင့်ရှောက်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေနေထိုင်ပြီးအနှစ်၆၀တစ်ခါ စောင့်ရှောက်သူလွှဲပြောင်းပါတယ်နာဇီစစ်ဗိုလ်တစ်ယောက်ဟာအဲ့ဒီစွမ်းအင်ကိုတပ်မက်လွန်းလို့ အနှစ်၆၀တိုင်တိုင်ဇွဲကြီးကြီးနဲ့လိုက်နေပါတယ် နာဇီရဲ့အကြံကတော့သူစွမ်းအားတွေရရင်နိမ့်ကျတယ်လို့သူယူဆရဲ့တဲ့လူမျိုးစုတွေ အပြတ်ရှင်းပြစ်ပြီးသူ့စိတ်တိုင်းကျကမ္ဘာတည်ထောင်မှာဖြစ်ပါတယ် ဒါကိုကာကွယ်ဖို့ဘုန်ကြီးဟာအနှစ်၆၀ထွက်ပြေးရင် နှစ်၆၀ပြည့်တဲ့အချိန်မှာဘယ်သူ့ကိုစောင့်ရှောက်သူအဖြစ်လွှဲအပ်မလဲ နာဇီစစ်ဗိုလ်ကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတာ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးအက်ရှင်ကားကောင်းတစ်ကားအနေနဲ့ကြည့်ရမှာပါပေလိတ်ကိုစောင့်ရှောက်သူဘုန်းကြီးအဖြစ်အားလုံးရင်နှီးမှာဖြစ်တဲ့ဟောင်ကောင်မင်းသားကြီးChow Yun Fatကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ် Translated & Review By Nu MonEncoded By LK
Seabiscuit(2003) Seabiscuit(2003)IMDb....7.3,,,,Rotten....77%"ဆွဲထား...ထိန်းထား..." ဆိုတဲ့ အော်ဟစ်သံတွေနဲ့အတူ လူလေးယောက်လောက် မြင်းတစ်ကောင်ကို ဝရုန်းသုန်းကား လိုက်ထိန်းနေရတယ်...အားလုံး ဝိုင်းပြီး ထိန်းလိုက်နိုင်ချိန်မှာတော့ မြင်းပိုင်ရှင်ဖြစ်ပုံရတဲ့ လူတစ်ယောက်က စကားတစ်ခွန်းပြောတယ်...."...သတ်လိုက်တော့..." တဲ့ခြေတစ်ဖက်မှာ မဆိုသလောက်လေး ထိခိုက်ပြီး အရိုးအက်သွားတဲ့ မြင်းတစ်ကောင်ဟာ ပြိုင်မြင်းအဖြစ် ဆက်ပြိုင်ဖို့ မဖြစ်နိုင်သ လောက်ပါပဲ...အဲ့တာကြောင့်လည်း "သတ်လိုက်တော့" ဆိုတဲ့ စကား ခပ်လွယ်လွယ်ထွက်လာခဲ့တာပါ...ဒါပေမဲ့လည်း မြင်းတွေကိုချစ်မြတ်နိုးသူ မြင်းဝါသနာရှင်တစ်ယောက်က အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ အဲ့မြင်းကို ဖြတ်ဝယ်ခဲ့ပါတယ်...မြင်းလေးရဲ့ နာမည်ကတော့ Seabiscuit ပါ...ဒီမြင်းလေးဟာ ၀ယ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ တခြားမြင်းတွေနဲ့ မတူတဲ့ အရည်အချင်းတွေကို သွားတွေ့မိတယ်.... အဲ့ဒီနောက်မှာတော့...ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတော့ ခံစားကြည့်လိုက်ပါဦး....ဒီဇာတ်ကားဟာ 1930-40 အတောအတွင်း နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ Seabiscuit ဆိုတဲ့ မြင်းလေးအကြောင်းကို ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်ကားလေးဖြစ်ပါတယ်...IMDbရော Rottenရော အကောင်းဆုံးအနေအထားမှာ ရှိနေတဲ့ အပြင် နာမည်ကြီးသရုပ်ဆောင်ပေါင်းများစွာ ပါဝင်နေလေတော့ မကောင်းမှာတော့ ပူမနေနဲ့ဗျို့.... အေးဆေးကြည့်လို့ရမယ့် အချိန်လေးမှာ ဒီကားကိုကြည့်စေချင်တယ်....ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ့ ဘာသာပြန်သူကတော့ Paing ပဲဖြစ်ပါတယ်....File Size : (1 GB) ...
Anger Management (2003 ဒေ့ဗ် ဟာ အရမ်းတော်တဲ့ စီးပွားရေးသမား တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် အရာရာတိုင်းကို စည်းစနစ်တကျ လုပ်တက်ပြီး အရှက်အကြောက်လဲ ကြီးသလို ဒေါသကိုလဲ မျိုသိပ်နိုင်သူဖြစ်ပြီး အောက်ကျို့တက်သူပါ ဒါပေမဲ့ တစ်ရက်မှာတော့ အလုပ်ကိစ္စ တစ်ခုကို ချိန်းဆိုထားလို့ လေယဉ် နဲ့ ခရီးထွက်ရပါတော့တယ်... အဲ့ဒီမှာ ပြသနာက စတော့တာပါပဲ ဒေ့ဗ် ဘေးနားမှာ ကျပ်မပြည့်တဲ့ အူကြောင်ကြား ဘဲတစ်ပွေ ရောက်နေပြီး စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာတွေကိုပဲ ဆက်တိုက်လုပ်နေခဲ့ပါတယ်... သက်သာလို သက်သာငြား ဆိုပြီး နားကြပ်လေးတပ်ပြီး ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့ လေယဉ်မယ် ကို အကူအညီတောင်းခဲ့ပေမဲ့ တလွဲတွေ ဖြစ်ခဲ့ပြီး နောက်ဆုံး ကိုယ်ထိလက်ရောက်မှု နဲ့ တရားရုံးရောက်ခဲ့ပါတယ် တရားသူကြီးက အင်မတန်စိတ်ရှည်ပြီး ဒေါသထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ ဒေ့ဗ် ကိုမှ ဒေါသထိန်းချုပ်နည်း သင်တန်း တက်ဖို့ အမိန့်ချမှတ်လိုက်ပါတော့တယ် ကဲ ဒေ့ဗ် တစ်ယောက် အေးချမ်းတဲ့ ဘ၀လေး ကနေ ဘယ်လို သောက်တလွဲ တွေ နဲ့ စတင်တော့မလဲ ဆိုတာ ဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ကြပါစို့ ဒီရုပ်ရှင်ကားကို Yuki Aurora က ဘာသာပြန်ပေးထားပြီး Thit San Khant မှ Encode ၍ ...
Anger Management (2003
Kill Bill 1 +2(2003+2004) အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ တက္ကဆပ်ပြည်နယ် အယ်လ်ပါဆို မြို့ကလေးရဲ့ ဘုရားကျောင်းငယ်လေးတစ်ခုက လပ်ထပ်ပွဲတစ်ခုမှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင် သတို့သမီးတစ်ယောက်အပါအ၀င် လူကိုးဦး၊ (သတို့သမီး ဗိုက်ထဲကကလေးပါ ပါရင် ၁၀-ဦး)တို့ဟာ ရက်ရက်စက်စက် အသတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။သူတို့ကို သတ်ခဲ့တဲ့သူတွေက “မရဏမြွေပွေး” လို့ခေါ်တဲ့ ကြေးစားလူသတ်သမားအဖွဲ့တစ်ခုကဖြစ်ပြီး သူတို့တစ်ကယ်သတ်ချင်ခဲ့တာကတော့ သူတို့ရဲ့ အဖွဲ့ဝင်ဟောင်းလည်းဖြစ်၊ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဘီလ် ရဲ့ ညာလက်ရုံး…ချစ်သူဟောင်းလည်းဖြစ်တဲ့ “သူတို့သမီး”(Uma Thurman) ကိုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။“သတို့သမီး”ဟာ ကံကောင်းထောက်မစွာ အသက်မသေပဲ ဒဏ်ရာအပြင်းအထန်နဲ့ “ကိုမာ”(မေ့မြော)ရပြီး ဆေးရုံမှာ ဆေးကုသမှုယူနေရင်း လေးနှစ်လောက်အကြာမှ ပြန်လည်နိုးထလာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအခါမှာတော့ သတို့သမီးဟာ သူနဲ့သူ့ရဲ့မမွေးလိုက်ပဲ သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ကလေးအတွက် သူ့ရဲ့ မိတ်ဆွေဟောင်းတွေနဲ့ ချစ်သူဟောင်းဖြစ်တဲ့ ဘီလ်တို့ကို လက်စားချေဖို့ ကြံစည်ပါတော့တယ်။ဇာတ်လမ်အသွားကတော့ အင်မတန်ရိုးရှင်းပါတယ်။ စတင်ရိုက်ကူးစဉ်က တစ်ကားတည်းနဲ့အပြီး ထုတ်လုပ်ဖို့ စီစဉ်ခဲ့ပေမယ့် ပြသချိန် ၄ နာရီကျော်ကြာမြင့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် Kill Bill Vol.1(2003) Vol.2 (20014) ...
Bad Boys II (2003) Bad Boys ဟာဆိုရင်အညွှန်းရေးစရာမလိုအောင်ကောင်းတဲ့ ဇာတ်လမ်းတစ်ခု ဆိုတာသိပြီးသားဖြစ်ကြမှာပါနော်။ ဒါရိုက်တာ Micheal Bay ဒေါ်လာ ၁၃၀မီလီယမ်အကုန်အကျခံ ရိုက်ကူးထားပြီး ဒေါ်လာ ၂၇၃ မီလီယမ်ပြန်လည်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ မားကပ်စ် ဘားနတ်(Martin Lawrence) နဲ့ သူ့တွဲဖက်ကြီး မိုက်ခ် (Will Smith) တို့ သူငယ်ချင်းအဆင့်ကနေ ယောက်ဖတွေအဖြစ်ရာထူးတိုးသွားကြတဲ့အပိုင်းပေါ့။ မားကပ်စ်ရဲ့ ညီမလေး ဆစ်ဒ်(Gabrielle Union) ကို ဂျော်နီတပီယာဆိုတဲ့ဘိန်းမှောင်ခိုသမားက ဖမ်းခေါ်သွားတဲ့အခါ ညီမချောလေးကိုကယ်မယ့်အစ်ကိုကြီး မားကပ်စ်နဲ့ ချစ်သူလေးကိုထိခိုက်မှာစိုးတဲ့ မိုက်ခ်တို့ ရုရှားတွေနဲ့ဘယ်လိုသွေးချောင်းစီးအောင်တိုက်ခိုက်ကြမလဲ။ အစိုးရကနိုင်ငံရေးအခက်အခဲတွေကြောင့် ဓားစာခံ ဆစ်ဒ်ကိုကယ်ပေးဖို့တွေဝေမှုတွေကြားက လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကောင်းတွေနဲ့ဘယ်လိုတိုက်ခိုက်သွားတယ်ဆိုတာ Bad Boys2မှာသဲထိတ်ရင်ဖိုကြည့်ရှုခံစားကြည့်ပါနော်။ Translated by Kira Encoded by sithu
National Security(2003) National Security(2003) နေ့စဉ်စားသုံးနေတဲ့ဟင်းလျာတွေတောင် တစ်မျိုးထဲထပ်ခါ ထပ်ခါစားသုံးနေပါက ရိုးအီသွားပါလိမ့်မည်.. ကြက်အဆီပျံ ၀က်သားနီလန် မအီအောင် ချဉ်ပေါင်ခံ လည်း နေ့စဉ်စားသုံးပါက အဆင်မပြေဖြစ်ပါလိမ့်မည်... အားလပ်ချိန်ထဲက ရုပ်ရှင်ကားတွေခံစားစဉ်မှာလည်း အတွေးအခေါ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ကားမျိုးတွေ လှည့်ကွက်ပေါင်းများစွာပါတဲ့ကားမျိုးတွေ ရင်နင့်အောင်ခံစားရတဲ့ကားတွေကို ဆက်တိုက်ကြည့်ပြန်တော့လည်း နှလုံးသားအဟာရမဖြစ်တဲ့အပြင် နွမ်းလျမှုတွေပဲ ပိုတိုးလာပါလိမ့်မယ်.. ဒါကြောင့် ဟာသကားတွေလည်း မရှိမဖြစ်လိုကိုလိုအပ်လေတော့ အလှည့်ကျခံစားဖို့ရာ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါသည်... ဒီကားထဲက ဟာသမင်းသားကြီး Martin Lawrence ကိုမသိရင်သာနေမယ်.. အူတက်အောင်ရယ်ခဲ့ရတဲ့ သူကားတွေဖြစ်သည့် Blue Streak ,Bad boyတို့ Big Momma's House တို့ကိုတော့ သိမယ်ထင်ပါတယ်.. ရယ်ရတာ အူတက်တယ်ဆိုတဲ့ဝေါဟာရကိုဒီကားကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ ခင်ဗျားထပ်သဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်.. ကိုင်းပြောတာလည်းရှည်ပြီဆိုတော့ ဇာတ်လမ်းအညွှန်းကို နည်းနည်းဆက်လိုက်ရအောင်.... ဇာတ်လမ်းအညွှန်း ************** နင်းကန် ရယ်ရတယ်...ဒါပဲ... ဘာသာပြန်သူကတော့ Zuel Khant Thwin ပဲဖြစ်ပါတယ်... File Size : (900 MB) and (353 MB) Quality : Blu-Ray 720p Format…mp4 Duration…01:28:00 Genre : Action, Comedy, Crime Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Zuel Khant Thwin Encoded ...
My Wife IsaGangster2(2003) IMDb Rating (6.1) ထိ ရရှိထားတဲ့ ဒီဇာတျကားဟာပထမဇာတျကားရဲ့ အဆကျအဖွဈထှကျရှိခဲ့တာပါ။ဒီဇာတျကားမှာလဲ ဂိုဏျးစတားမလေးရဲ့ ရနျကွှေးတှကေို ဘယျလိုပွနျဆပျမယျဆိုတာ........။Action, Romance, Crime အမြိုးအစားဖွဈပွီး ခံစားအားပေးကွညျ့ပါဦး။****My Wife isaGangster ဇာတျကားတှကေို https://channelmyanmar.org/?s=my+wife+is+a+gangster မှာရှာပါ။***----------------------------------------------------IMDb Rating (6.1) ထိ ရရှိထားတဲ့ ဒီဇာတ်ကားဟာပထမဇာတ်ကားရဲ့ အဆက်အဖြစ်ထွက်ရှိခဲ့တာပါ။ဒီဇာတ်ကားမှာလဲ ဂိုဏ်းစတားမလေးရဲ့ ရန်ကြွေးတွေကို ဘယ်လိုပြန်ဆပ်မယ်ဆိုတာ........။Action, Romance, Crime အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး ခံစားအားပေးကြည့်ပါဦး။****My Wife isaGangster ဇာတ်ကားတွေကို https://channelmyanmar.org/?s=my+wife+is+a+gangster မှာရှာပါ။*** File Size...(800MB) Quality...DVD-Rip Format...mp4 Duration...01:50:00 Subtitle...Myanmar Subtitle(Hardsub) Encoder...Nyeinsaeya Aung Translated by Missy Win
Final Destination2(2003) Final Destination2(2003) IMDb......6.2/10 (Blu-Ray 1080p 5.1 CH,Blu-Ray 720p တို့ဖွငျ့ အရောငျအသှေးစုံလငျစှာဖွငျ့ ပွနျလညျတငျဆကျပေးလိုကျပါသညျ….))Horror ကားကွိုကျနှဈသကျသူတို့အဖို့ ကွညျ့ဖူးသမြှထဲမယျ သူတို့ရဲ့ နှလုံးသညျးအူကို လှုပျရမျးနိုငျတဲ့ ဇာတျကားမြားကို ပွောပါဆိုရငျFinal Destination တှကေိုပွောကွမှာသခြောသလောကျပါပဲ....ယ်ခုနောကျပိုငျးထှကျတဲ့ horror ကားတျောတျောမြားမြားမှာ အထူးသဖွငျ့ Jump scare မြိုး ဝုနျးကနဲဒိုငျးခနဲ ခွောကျလှနျ့တတျတဲ့ ကားမြိုးတှကေို horror ကား ကွိုကျနှဈသကျသူသူတို့အဖို့ ကွာလာတော့ အနညျးငယျရိုးအီလာသလိုပါပဲ.......Final Destination လို horror မြိုးကတြော့လညျး တကယျ့ကို သှေးပကျြထိတျလနျ့စရာဖွဈတဲ့အပွငျကြောထဲစိမျ့နအေောငျ ကွောကျနရေတာမြိုး....မငျး horror ဘယျလောကျ crazy ဖွဈလဲဆိုတာကို Final Destination (1 to 5)ကို စဆုံးကွညျ့ဖွဈလားဆိုတာမြိုးနဲ့ ဆုံးဖွတျရလောကျအောငျ သှေးပကျြထိတျလနျ့စရာပါပဲ... ယ်ခုလညျး New Line Cinema ကFinal Destination Reboot ကိုစတငျလုပျဆောငျနပွေီလို့သိရပါတယျ။ ဒီတော့ စဆုံးလေးကို ပွနျလညျ ခံစားခငျြသူမြားအတှကျ အရညျအသှေးစုံလငျစှာဖွငျ့ ပွနျလညျတငျဆကျပေးလိုကျပါသညျ..... -------------------------------------------------------- File Size : (1.4GB) and (852MB) Quality : ...
Tokyo Godfathers(2003) Tokyo Godfathers(2003) IMDb....7.9,,,,,Rotten ...90 "Tokyo Godfathers" ဆိုတဲ့ animation ကား​လေးကို​တော့ စာ​ရေးဆရာ Peter B. Kyne ရဲ့ ပထမဆုံးလက်​ရာဖြစ်​တဲ့ " three godfathers" ဆိုတဲ့ဝတ္ထု အ​ပေါ်အ​ခြေခံပြီး ဒါရိုက်​တာ Satoshi Kon က ရိုက်​ကူး​ရေးဆွဲထားတာပဲဖြစ်​ပါတယ်​။ ဒီဇာတ်​ကား​လေးက​တော့ မူရင်းဝတ္ထုနာမည်​ဖြစ်​တဲ့ " Three Godfathers" ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ တိုကျိုမြို့​ပေါ်က အိမ်​ယာမဲ့လူသား၃ဦးရဲ့ ဘယ်​က​ရောက်​လာမှန်းမသိရတဲ့ လူမမယ်​က​လေးတစ်​ဦးအ​ပေါ်မှာထားရှိတဲ့ ​မေတ္တာအတိမ်​အနက်​ကို ​ဖော်​ပြထားတဲ့ကား​လေးတစ်​ကားပဲဖြစ်​ပါတယ်​။ ဇာတ်​လမ်းအညွှန်း -ချမ်း​အေးလှတဲ့ ခရစ်​စမတ်​ည​လေးတစ်​ညမှာ တိုကျိုမြို့​ပေါ်က အရက်​သမားတစ်​​ယောက်​ ၊ ဟိုမိုတစ်​​ယောက်​ နဲ့ ဆယ်​​ကျော်​သက်​အရွယ်​အိမ်​​ပြေးမ​လေးတစ်​​ယောက်တို့က စွန့်​ပစ်​ခံထားရတဲ့ က​လေးတစ်​​ယောက်​ကို​တွေ့ရှိရာက က​လေးရဲ့မိဘ​တွေဆီကို ပြန်​ပို့​ပေးဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပုံနဲ့ စတင်​ခဲ့ပါတယ်​။ ဒီလိုနဲ့ သွေးမ​တော်​သားမစပ်​လူမမယ်​အရွယ်​က​လေးတစ်​ဦးအတွက်​ တိုကျိုမြို့​ပေါ်က ​အေးခဲလွန်းလှတဲ့ လမ်းမ​တွေထက်​မှာ မိဘရှာပုံ​တော်​ဖွင့်​​နေရတဲ့ အိမ်​ရာမဲ့လူသား၃ဦးရဲ့ ရုန်းကန်​လှုပ်​ရှား​နေမှုများကို ကြည့်​ရှုခံစားရမှာပဲဖြစ်​ပါတယ်​။ လူတိုင်းမှာကိုယ်​စီကိုယ်​ငှ ဝမ်းနည်းရတဲ့အတိတ်​မျိုး​တွေ ရှိ​နေ​ကြောင်း၊ မိဘနှင့်​သားသမီးတို့ကြားရှိ ချစ်​ခြင်း​မေတ္တာနှင့်​ ခွင့်​လွှတ်​နားလည်​မှုများအ​ကြောင်း အပါအဝင်​ လူတိုင်းအတွက်​ မိသားစုဘဝဆိုတာအ​ရေးကြီး​ကြောင်းကို ရိုက်​ကူးပုံ​ဖော်​​ပေးထားတာပဲ ဖြစ်​ပါတယ်​။ က​လေး​လေးကို​ရော ...
Cradle2the Grave (2003) Cradle2the Grave (2003)______IMDb - 5.8/102003 က ထှကျရှိခဲ့တဲ့ Cradle2the Grave ဇာတျကားမှာ မငျးသားကွီး ဂကျြလီ နဲ့အတူ ပါရာနာဝေးလို့ ပရိတျသတျတှေ သိကွတဲ့ Mark Dacascos တို့အတူတှဲဖကျသရုပျဆောငျထားပါတယျ IMDb 5.8 ရရှိထားပွီး Action ကားကောငျးကောငျးကွညျ့လိုသူ တှအေတှကျတော့ လကျမလှတျသငျ့တဲ့ဇာတျကားမြိုးဖွဈပါတယျ ဇာတျလမျးအကဉျြးကတော့.. ကြှမျးကငျြသူခိုးအဖှဲ့တဈဖှဲ့က အဖိုးတနျကြောကျတုံးလေးကို ခိုးယူမိပွီးသူတို့ထငျသလိုလညျးမဖွဈလာခဲ့ဘူး..သူတို့လကျထဲကနေ အဆငျ့ဆငျ့လုယူခငျြနတေဲ့သူတှကေလညျးပေါမြားနပေါတယျ ဒီကြောကျတုံးအနကျလေးဟာ ဘယျလိုမြားတနျဖိုးရှိနတောလဲ ပွီးတော့ အဲ့အရာကိုလကျဝယျပိုငျဆိုငျထားတဲ့သူခိုးအဖှဲ့ကရော ဘယျလိုမြိုး အခကျအခဲတှကွေုံမလဲ..ဆိုတာကို တဈကားလုံးစှနျ့စားခနျး ဖိုကျတငျခနျးတှအေပွညျ့ နဲ့ ကွညျ့ရှုရမှာပဲဖွဈပါတယျဘာသာပွနျ နဲ့ အညှနျးကတော့ Phyo Zaw ဖွဈပါတယျ File Size - 1 GB Quality - Blu-Ray 720p Duration - 01:41:13 Translator - Phyo Zaw Encoder - LK